Mid kamid ah la-taliyeyaasha Farmaajo oo laga soo celiyay Garoonka Kismaayo | Banaadir Times
HomeWararMid kamid ah la-taliyeyaasha Farmaajo oo laga soo celiyay Garoonka Kismaayo
Wararka laga helayo Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayan in Maanta garoonka Kismaayo laga soo celiyay diyaarad siday la-taliyaha arrimaha doorashooyinka ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo lagu Magacaabo Cabdi Cali Raage.
Diyaarada oo ka ambabaxday magaalada Muqdisho ayaa markii ay ka degtay garoonka Kismaayo lagu wargeliyay in dadka saran dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho, waxan dadkaasi kamid ahaa Cabdi Cali Raage oo sidoo kale ah Musharax Xildhibaan.
Qaar kamid ah siyaasiyiin kasoo jeeda Gobolka Gedo ayaa warkaan xaqiijiyay, iyaga oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in qof musharax Xildhibaan ah laga loo diido in uu tago Magaalada kismaayo.
Cabdi Caali Raage oo sidoo kale mar soo noqday La Taliye Sare Madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegaa inuu ka mid ahaa xubnihii udub dhexaadka u ahaa khilaafkii Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Previous articlePuntland oo Galmudug gaarsiisay Gurmad la xiriira la dagaalanka Al-Shabaab
Next articlePuntland oo ka shirtay amniga degaannadeeda Go’aana soo saartay